စစ်တွေ မြင်ကွင်း | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Myanma News » စစ်တွေ မြင်ကွင်း	37
Posted by ကထူးဆန်း on Jun 21, 2012 in Myanma News, News | 37 comments
အသားဝါဖြစ်နေလို့ နေပြထားတာပါတဲ့ ။ မွေးကင်းစ ကလေးငယ် ။ ဆေးရုံမှာ မထားနိုင်ဘဲ နေပြနေရပါတယ်။
မျှော်သူမော ရှာပြီ ။
အသိတစ်ယောက်ဆီက မလာတာပါ။ About ကထူးဆန်း
has written 96 post in this blog.
View all posts by ကထူးဆန်း →	Blog
Share this:	Community Answers
ဦးဦးပါလေရာ says: ဒီလိုဖြစ်နေကြမယ်မှန်း..
အခုလို မြင်ရတော့လဲ ရင်ထဲမကောင်းလိုက်တာဗျာ…
ဒေါသ မောဟတွေကြားမှာ ဒီလိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေက ဓါးစာခံဖြစ်ကြရရှာတယ်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12
kaung myat says: ဒီနေရာ အတွေးတစ်ခုပေါ်လာတာတစ်ခု ပဲ ပြောချင်တယ်
ဒုက္ခ သည်ချင်းတူပေမဲ့ ကချင် က ဒုက္ခ သည်တွေထက် ရခိုင် ဒုက္ခ သည်တွေက ပိုဆိုးမယ်ထင်တယ် ဟိုက အချင်း ချင်းညှိ ယူလို့ ရအုန်းမယ် ထင်တယ်၊ ရခိုင် တွေ ကတော့ ကိုယ့် နိုင်ငံ ထဲမှာ နေပြီး ကုလားတွေကိုကြောက်နေရတာမိူးဖြစ်နေပြီ။ ကိုယ်သာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီကုလားတွေ ကို နုတ်နုတ်စဉ်းပြီးအမုန့် ကြတ်ပစ်မယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 174
Oo Oo says: ရာဇ၀င်မှာစာတင်ရလောက်အောင် စစ်တွေမြို့ကြီးမီးလောင်တိုက်အသွင်းခံခဲ့ရတာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2269
htoosan says: အကုန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ..ကျန်တာတွေ ကျန်ပါတယ် ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9939
မောင်ပေ says: သနားမိတယ်ဗျာ
ကိုယ်သာ အဲဒီလိုမျိုးကြုံ ခဲ့ရင်ဆိုပြီး ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1459
Mလုလင် says: June လ မိုးအေးအေး လေး နဲ့ ကလေး ငယ်တွေ ကျောင်းတက် စာကျက်နေချိန်မှာ .. သူတို့မှာတော့ ကြည့်ပါဦး .. နေရပ်ပြန်ပို့လိုက်တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ တွေ က ဘယ်တော့ ပြန်လာကြမလဲ .. သိချင်သား …။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2685
kyeemite says: အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေသွားကြပါစေ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 323
ကြည်ဆောင်း says: ဓာတ်ပုံမြင်ရတာနဲ့တင် ရင်ထဲမကောင်းလိုက်တာ။ တကယ်ကြုံတွေ့ ရတဲ့သူတွေစိတ်ထဲခံစားနေရမှာ တွေးတောင်မတွေးရက်ဘူး။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 134
hein latt says: ဖြစ်နိုင်ရင်သွားပြီးကူညီချင်လိုက်တာ သူတို.လေးတွေဘ၀ကသနားစရာ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1252
ဘဲဥ says: ကဲ ရွာသူားတို့ရေ့ ကျနော်တို့ တတ်နိုင်တာလေးတွေနဲ့ နည်းတယ်များတယ် သဘောမထားပဲ စေတနာအရင်းခံပြီးတော့ ကူညီလိုက်ကြစို့ဗျာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 979
htet way says: မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ဘာသာရေး အဖွဲ့ ချုပ် အစ္စလာမ်က သိန်း၁၀၀၀
ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်းက သိန်း၁၀၀၀နဲ့ရခိုင်အမျိုးသား အသင်းက သိန်း၃၀၀
လှူကြောင်း unity ဂျာနယ်မှာဖတ်ရပြီး
ထပ်မံလှူဒါန်းမူများရှိနေကြရာ သိန်း တစ်သောင်းကျော်ရှိပြီ လို့ သိရပါတယ်။
သားဦး၊မြေးဦး says: ဆရာထက်ရေ အလှူငွေတွေ အတွက်ကြောင့်တဖက်တလမ်းက တော့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 21
kyaw swar says: သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီး နာဂစ်မှာခံခဲ့ရတာ တွေကိုသွားသတိရတယ်
စိတ်မကောင်းပါဘူးတိုင်းရင်းသားတို့ရေ ငါတို့လဲမင်းတို့ အတွက်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8348
ဆူး says: မြင်ရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ.. တဖက်နဲ့ တဖက် အမုန်းတရားတွေ က မြေဇာပင် ဖြစ်ရတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 123
mihninlay says: စိတ်မကောင်းလဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ချင်းလဲစာတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 272
cum min says: အေးဗျာ….
maung khinmin says: လူ့ ဘ၀ ဒုက္ခ ….
သြော်…ဗုဒ္ဓ ကယ်မလို့ မရ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 18
မိုးမှောင် says: လူ့ဘဝ ဒုက္ခ
သြော် … ဗုဒ္ဓကယ်မရသလို..
အလာဟ် လဲမကယ်နိုင် ၊ မ မနိုင် တော့ပါ ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1669
shwe kyi says: သမိုင်းတွင်မယ့် ရခိုင်အရေးအခင်းကို သေသည်အထိမမေ့ဘူး။
အေးချမ်းမှုကို မြန်မြန်ပြန်လည် တည်ထောင်နိုင်ပါစေ။
mamanoyar says: အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5780
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: တော်တော်ဖျက်လို့ ဖျက်ဆီး လုပ်တတ်တဲ့ကောင်ဒွေကို ရေလည်တင်းဒယ်ဗျာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2321
ko khin kha says: သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့စစ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အဖြစ်တွေက
ရင်နာမှု့တွေနဲ့ ကြုံရတယ်ဆိုတာ အမှန်ဘဲနော်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 688
mocho says: နေ ခဲ့ ဖူးတဲ့ မြို့ တမြို့ ကို ဒီလို ပုံ စံ နဲ့ တွေ့ ရ တာ တော် တော် စိတ် မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။ ကိုယ် တောင် ဒီလို ခံစားရရင် အဝေးရောက် မြို့ သားတွေ ဆို စိုးရိမ် စိတ် က ငယ် ထိပ် တတ်နေ မှာပဲ။ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ထူထောင် နိုင် ပါစေ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 32
Aung says: နောက်ထပ် ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြီးမျိုး ထပ်မဖြစ်အောင်
ရေတို ရေရှည် စီမံကိန်း ချပြီး ဖြေရှင်းကြပါ
အကောင်းဆုံး အကြံညဏ်ကောင်းများ ပေါ်ထွက်ပြီး
ရခိုင်ပြည်နယ် အမြန်ဆုံး အေးချမ်းသာယာပါစေ……
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 258
Nyein Nyein says: မြင်ရတွေ့ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲနော်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ပိုသနားတယ်။ အကူအညီတွေ ဒီထက်မကရပြီး အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ…………………
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 109
ဂဂျီဂဂျောင် ပျိုတို့မောင် says: မိုးရာသီ ဖြစ်နေတော့ စိုစိုစွတ်စွတ် နေကြရမှာ . .
အော် . . အနိစ္စ ။ ဆင်းရဲခြင်းများမှ အမြန်ဆုံးကင်းလွတ် ကြပါစေ . .
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7057
etone says: ကိုထူးဆန်းရေ .. မြင်ရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် … ။
အခုလိုမိုးတွင်းမှာ မြေကြီးပေါ် အခင်းပါးလေးပဲ ခင်း အိပ်နေနိုင်သူတွေကိုလည်း သနားမိတယ် … ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် သူတို့ ဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်ပြီး အားငယ်နေမလဲဆိုတာ … ။ မနေ့ ညက ဆယ့်တစ်နာရီထိုးလောက်မှာ မြ၀တီကလာတဲ့ သတင်းကြည့်လိုက်ရသေးတယ် … နေရပ်ကို အန္တရာယ်ကင်းလို့ ပြန်ပို့နေတာတွေပါတယ် … ပြီးတော့ အိမ်လေးတွေ ဆောက်ပေးတာ ပါတယ် … ။ အိမ်သာပြောတယ် ကိုထူးဆန်းရယ် .. အခု ဓါတ်ပုံထဲက အိမ်သာလောက်တောင် တောင့်တင်းမှုမရှိဘူး …။ ဒီမှာကာထားတဲ့ တာလဘတ်တွေက .. သစ်သစ်လွင်လွင်ရှိသေးတယ် …သူတို့ကို အိမ်လိုမျိုး ရွက်ဖြဲတဲလိုမျိုး လုပ်ထားပေးတဲ့ တာလဘတ်တွေက မိုးရေနဲ့ ရွံ့ တွေ ပြာတွေ ကပ်နေတာ ….။ အဖျက်သမားတွေကို အမိမြေကနေ အပြီး ပိုင် နှင်ထုတ်နိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရတော့မယ် … စကားမစပ် ..ဟိုပြသနာကောင် မုဒိမ်းကောင် ၊ သတ်သေတဲ့အကောင် …… သူ့သတင်း ဘာလို့ အမှောင်ချထားကြပါလိမ့် … ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 570
ဖိုးထောင် says: အဲဒါ ကျနော်တို့ အမျိုးရင်းတွေဗျ
စောင့် ကြည့်သူ says: ရင်နင့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းပါလား ကိုထူးဆန်းရေ
ဒီလိုမျိုး ဖြစ်အောင်ပြုသူများ ကို ကြည့်မနေကြပါနဲ့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 23
lu lay says: အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျား
ကျွန်တော်ကအခုမှ မန်ဘာ အသစ်လေးပါ
htoosan says: ကြိုဆိုပါတယ် lu lay ရေ။
lu lay says: ကွန်မန့်ကို ရေးချင်နေတာကြာပြီ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2697
pooch says: စိတ်မကောင်းဘူး ဒါမျိုးမြင်ရင် ။ ရင်ထဲ ဆို့လာတယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5308
MaMa says: ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီး
ထိထိရောက်ရောက် လှူနိုင်မယ့်အဖွဲ့အစည်းကို ရှာနေတဲ့ အလှူရှင်တစ်ဦးက
မန်းဂေဇက်က စုပေါင်းလှူမယ့် အလှူကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ၁ သိန်းကျပ် လာပေးထားပါတယ်။
ရွှေတိုက်စိုးကို ဆက်သွယ်ပြီး လှူဒါန်းလိုက်ပါမယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 286
Phaung Phaung says: ပုံတွေမြင်ရတာ ရင်ထဲမှာမချိပါဘူး။ အခုလည်း သတင်းတင်ထားတာတွေတွေ့နေရတယ်။ အစိုးရက ရခိုင်အရေးမှာ “ ဒိုင်လူကြီးလုပ်မယ်တဲ့” ။ ရင်နာလိုက်တာ။ ဘယ်သူ့ဘက်မှ ဘက်မလိုက်ဘူးဆိုတဲ့
သဘောပေါ့။ ကိုယ့်လူမျိုးရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ဒီလောက်အိုးအိမ်မဲ့ အသက်တွေဆုံးရှုံးရတာ သူတို့က
ဒိုင်လူကြီးလုပ်ဦးမယ်တဲ့။ ကြားလို့မှမကောင်း။ ဘင်္ဂလီတွေက သူတို့အဘေးတွေမို့လို့လား။ အကြမ်းဖက်
တာသိသာထင်ရှားနေတဲ့ဟာ နိုင်ငံကနေပါမောင်းထုတ်ရမှာပါ။ အစိုးရကို အားမရတာတွေအများကြီးပါ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 900
snow white says: တကယ်သနားစရာပုံလေးတွေ ရာသီကောင်းမှာမှ တို့သွေးချင်းတွေဒုက္ခရောက်နေရတယ် မိုးရာသီမှာသူတို့လေးတွေ ဘယ်လောက်ဒုက္ခများလိုက်မလဲနော်ကလေးငယ်တွေ မကဘူးသက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ပါဘယ်လောက်ဒုက္ခများလိုက်မလဲလှူဒါန်းမှုများများရပါစေ ထိုအခက်ခဲမှ အမြန်ဆုံး လွတ်မြှေက်ပါစေ ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6
ပန်း ချစ်သူ says: ကျွန်တော့်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်ဦးစီးဌာန မှလည်း ကူညီနေပါတယ်………
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel reply
Comments By Postရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - ဆူး - Yin Nyine Nwayလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - မွေ့ကေသာကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - kyeemite - အလင်း ဆက်ကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - ဆူးအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးယုံလား? - ဦးကြောင်ကြီး - ဦးဦးပါလေရာကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - ရွှေတိုက်စိုး - Ko chogyiအဟံ ပထမံ - ဦးကြောင်ကြီး - kyeemiteအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - kyeemite - padonmarဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - ကထူးဆန်းသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - kyeemite - အလင်း ဆက်လူပါး ပုလင်းထိ - အောင်ကြူး - Ma MaPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - အောင်ကြူး - ဦးဦးပါလေရာအတ္တဆန် - ခရီးသည်ကြီး - N@ng Ghi Ghi Joe Zမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ခရီးသည်ကြီး - padonmarနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - amatmin - parlayar 46ငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - အလင်း ဆက် - padauk moeမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - အလင်း ဆက် - မောင် ပေကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - အလင်း ဆက် - TNAမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - padonmar - black chawမင်းပြုစားနေတဲ့ မုသားစကားလေးတစ်ခွန်း............ - အလင်း ဆက် - padauk moeနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - GaviaGirl - မောင် ပေအညာနွေ ဘယ်ဆီခန်း တောင်ညိုနေကွယ်သမ်း............. - မောင် ပေရာသီပိတ်ပွဲစဉ်များထဲမှ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77838 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67215 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66706 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58416 Kyats )MaMa (57761 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...